Jawaabta Madaxweyne Farmaajo, oo la waydiiyay meesha ay martay matalaaddii gobolka Banaadir. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Jawaabta Madaxweyne Farmaajo, oo la waydiiyay meesha ay martay matalaaddii gobolka Banaadir.
Jawaabta Madaxweyne Farmaajo, oo la waydiiyay meesha ay martay matalaaddii gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, oo ka qayb galay dood-cilmiyeed lagu lafa gurayay arrimaha doorashooyinka iyo heshiiskii dhowaan lagu gaaray Muqdisho, ayaa wax laga waydiiyay meesha ay ku dambeeyeen 13-kii kursi-baarlamaan oo loo qoondeeyay gobolka Banaadir.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa sheegay in arrintaasi ay weli hortaallo baarlamanka kadib markii uu isugu ka codsaday in la meelmariyo.
“ 13-ka kursi ee Gobolka Banaadir ee aan ka codsaday Golaha Shacabka oo ay aqbaleen, haatan waxa ay horyaallaan Guddoonka Labada Gole ee Baarlamaanka, maadaama ay ka soo gudubtay hannaanka siyaasadeed oo lagu heshiiyey oo ay dhiman tahay in la waafajiyo sharciga’’ ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo ka jawaabayo su’aal laga waydiiyay arrintaas.
Xildhibaannada loo qoondeeyay matalaadda gobolka Banaadir, ayaan meella looga soo darin heshiiskii 15-ka qodob ka koobnaa ee ay wada gaareen dawladda Federaalka ah Dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Muxuu yahay khilaafka ka dhexetaagan madaxweyne Qoor-qoor iyo Ciidanka Xoogga dalka?
Kenya iyo Itoobiya oo ka heshiiyay khilaafkooda Jubaland
Wasiir Jamaal: “waa inaan ogaanaa Hay’adaha waddanka ka shaqeeya halka ay lacagaha marsiiyaan”